Amadolobha asogwini lwase-Asturian okufanele uvakashele | Bezzia
UMaria vazquez | 21/07/2021 10:00 | travel
I-Asturias ingenye yezindawo esizithandayo. Futhi kungukuthi ngaphezu kokuba ne- amanye amadolobha amahle kakhulu eSpain, e-Asturias ungajabulela isimo sezulu esimnandi kakhulu ehlobo. Yingakho namhlanje siphakamisa amadolobha asogwini lwase-Asturian esikholelwa ukuthi akufanele uphuthelwe.
Kule ngxenye yokuqala sizohamba ugu oluphakathi kweGijon nomngcele neGalicia. U-Avilés, uCudillero noLuarca babe ngabantu abathathu abakhethiwe. Bonke bakumema ukuthi ulahleke ezitaladini zayo, uhambe uphinde uhlole, ukuze ungaphuthelwa amanye amakhona alo.
1.1 Izindawo ongeke uziphuthe esikhungweni sezomlando
Idolobha lase-Avilés liyindawo yethu yokuqala yokuma. Idolobha elakhiwe osebeni lomfula i-Avilés, ambalwa nje Amakhilomitha angama-30 ukusuka eGijon, uyasinikeza esinye sezigqoko zomlando ezinhle kakhulu esingayithola e-Asturias. Wamemezela Indawo Yomlando-Yobuciko ngo-1955, ukulahleka ezitaladini zayo kuyindlela engcono yokuyithola, yize imephu ingalimazi.
Izindawo ongeke uziphuthe esikhungweni sezomlando
Umakhelwane weSabugo, eyaziwa ngokuthi indawo yamatilosi, enye yezindawo ezinhle kakhulu zalesi sikhungo esinomlando.
La IPlaza de los Hermanos Orbón, lapho iMakethe yaseLas Aceñas itholakala khona, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX.
La Isonto lamaRoma kusukela ngekhulu le-XNUMX woFata baseFranciscan abatholakala ePlaza Carlos Lobo, phambi kweMnyuziyamu Wezomlando Wasemadolobheni. Kulona kukhona ithuna likaPedro Menéndez, intuthuko yaseFlorida, itilosi nomsunguli wedolobha elidala kunawo wonke e-United States, uSt. Augustine waseFlorida.
La Plaza de España noma iThe Patch nemigwaqo ezungezile: iFerrería, iCámara noma iRivero
La IPlaza de Domingo Álvarez Acebal, phakathi kwezinye zezingilazi ezinhle eziseBalsera Palace kanye neSonto laseSan Nicolás de Bari.
Umgwaqo uGaliana, umgwaqo onamamitha angama-252 nje owakhiwe ngekhulu leshumi nesikhombisa ngesikhathi sokunwetshwa kwedolobha iBaroque. Umgwaqo osekelwa isikhathi eside e-Avilés futhi okuwukuphela kwendlela egandayiwe kabili: enye egandayelwe ukuhamba kwezinkomo enye eyenziwe ngothayela yezakhamizi.
Ngaphezu kwalokho, ungakuthola kujabulisa ukuvakashela Amathuna kaMasipala waseLa Carriona, indawo enokuhlobana okukhulu komlando nobuciko okuyingxenye ye-ASCE (Inhlangano Yezinsimbi Ezisemqoka eYurophu). Futhi kunjalo Isikhungo saseNiemeyer, isikhungo samasiko esakhiwe ngumdwebi odumile waseBrazil u-Óscar Niemeyer futhi esenkabeni yomfula.
Idolobhana elincane lokudoba laseCudillero, umemezele indawo yomlando wobuciko, Igqame ukuhleleka kwayo ngesimo se-amphitheatre nangemibala ejabulisayo yezindlu zayo. Izizathu zokuthi kungani kufanelekile ukuvakashela nokulahleka phakathi kwemigwaqo yaso ethambile nezindlela.
Ukuhamba uyindlela ekahle yokuthola idolobha kanye neminye imibono emihle yetheku. Ngemuva kwalokho, kuyalulekwa futhi ukuhamba ngakwindlela ehamba phambili exhuma itheku ne Indlu yesibani yeCudillero, eyakhiwe ngo-1858 futhi lapho kutholakala khona imibono emihle ye-panoramic.
Eduze kakhulu neCudillero ngiyakukhuthaza ukuthi nawe uvakashele I-Quinta de Selgas, iqoqo lesigodlo nefa elihlelwe indawo elingamakhulu ayizi-900000 m2 elakhiwe phakathi kuka-1880 no-1895 ngokuqala kwabafowethu u-Ezequiel noFortunato de Selgas Albuerne. Isigodlo sigcina umhlobiso waso wokuqala ucishe unganyakazi, futhi izindlu zemidwebo yamakhosi amakhulu afana noGoya, El Greco, Luca Giordano, Corrado Giaquinto noVicente Carducho. Izingadi, ngokwengxenye yazo, ziyashintshashintsha phakathi kwesitayela sejiyometri saseFrance sekhulu le-XNUMX kanye nesitayela sothando noma esihle esaqala ukuba semfashini e-United Kingdom ngekhulu le-XNUMX.
Itheku laseLuarca liyindawo enhle kakhulu futhi ngelinye lamadolobha asogwini lwase-Asturian okufanele uvakashele kulo. Yaziwa nangokuthi i-White Villa, njengoba lo kungumbala ogqamile ezindlini zabo, ifihle izindawo eziningi ezilindele ukuvakashelwa. IPalacio de La Moral, isakhiwo esihle esivela ngekhulu le-XNUMX, le-XNUMX nele-XNUMX eliseCalle Olavarrieta singesinye sazo. Enye, ikota yabadobi ICambaral,
Umlando weNuestra Señora la Blanca kanye ne Indlu yesibani seLuarca bakha izakhiwo eziyinhle ngobuhle obukhulu. Kutholakala ekugcineni kwe-Atalaya promontory, inikeza imibono engenakuhlulwa. Yize uma sikhuluma ngemibono, kufanele futhi sisho leyo etholakala endaweni eyiSan Roque, esentabeni.
Okunye okumele ukubonwe eLuarca yiBosque Jardín de la Fonte Baixa, ingadi yesibili yezitshalo ezizimele eSpain. Ingadi ye-Atlantic enamahektha angaphezu kwama-500 akhiwe ngezindawo zokuhamba, amachibi kanye nezikwele lapho kunikezwa khona izinkambo eziqondisiwe.
Uyawazi amanye ala madolobha asogwini lwase-Asturian?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » travel » Amadolobha asogwini lwase-Asturian okufanele uwavakashele